» “माओवादी नेता बर्तौला,लाई युवा संघका, उपाध्यक्ष ,श्रेष्ठको चे’ता’व’नीः ‘पाखुरी कै, घमण्ड’ भए जीवन वीमा गरेर मैदान,मा आउ”’ “माओवादी नेता बर्तौला,लाई युवा संघका, उपाध्यक्ष ,श्रेष्ठको चे’ता’व’नीः ‘पाखुरी कै, घमण्ड’ भए जीवन वीमा गरेर मैदान,मा आउ”’ – हाम्रो खबर
“माओवादी नेता बर्तौला,लाई युवा संघका, उपाध्यक्ष ,श्रेष्ठको चे’ता’व’नीः ‘पाखुरी कै, घमण्ड’ भए जीवन वीमा गरेर मैदान,मा आउ”’
हाम्रोखबर संवाददाता 33 Views
“काठमाडौँ । नेकपा एमालेको प्रभावशाली भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा युथफोर्स उपप्रमुख पुष्प श्रेष्ठले माओवादीका नेता जनक बर्तौलालाई खुल्ला चुनौ,ति दिनुभएको छ ।”
“सस्तो लोकप्रीयता कमाउन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा संघका इन्चार्जमाथि अराजनीतिक भाषा प्रयोग गरेको भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कडा रुपमा आपत्ती जनाउनुभयो । नेता श्रेष्ठले मानसिक सन्तुलनमा समस्या भएको भए पाटन अस्पतालमा गई उपचार गराउन बर्तौलालाई सुझाव दिँदै पाखुरी कै, घमण्ड भएको भए जीवन वीमा गरेर मैदानमा आउन चेतावनी समेत दिनुभयो ।”
“उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ, ‘सस्तो लोकप्रियता कमाउन जनक बर्तौलाजीले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य,युबा आन्दोलनका नायक तथा लोकप्रिय नेता महेश बस्नेतलाई भि,ड,न्तको निम्तो दिएको सुनेँ ! तपाईको अभिव्यक्ति सपनामा बर्बराएको जस्तो सुनियो । स्यालले सिंहलाई चु,नौती दिएजस्तो देखियो ।”
“मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको भए – पाटन मानसिक अस्पतालमा उपचार गराउनु । दिमाग बिग्रिएको छैन भने अबदेखि बोल्नु अघि आफ्नो औ,का,त र है,सि,यत हेर्नु ! म पनि बिगतमा माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएको हुँ । तपाईको औ,का,तको बारेमा मलाई राम्रो जानकारी छ ।”
“जिम्मेवार व्यक्तिले बोल्दा, जिम्मेवार ढंगले बोल्नुपर्छ । राजनीतिक एजेण्डा छन् भने मैदानमा राजनीतिक बहस गरौँ ! पाखुरी कै घमण्ड छ भने जीवन बिमा गरेर मैदानमा आउँ तिमीलाई ठिक, लगाउन म नै काफी छु ! युवासंघ नै काफी छ !! युथफोर्स एउटा सिपाही नै काफी छ !!!’